NOOCYADA DHAQANKA DOOFAARKA: SHARAXAADDA DHAMMAAN MARXALADAHA - XOOLAHA
Helitaanka hilibka doofaarka tayo sare leh ee guriga jooga ma aha mid aad u adag.
Waxaa intaa dheer, dad badan ayaa u yimid go'aanka ah in ay ka shaqeeyaan soosaaridda doofaarka gudaha, gaar ahaan haddii ay si joogta ah u soo galaan hilibka hilibka iyo "maaha wax cusub oo cusub".
Sidaa darteed, waayo-aragnimada xoolaha noocan oo kale ah ayaa la uruuriyay aad u ballaadhan, taas oo macquul ah xitaa marxaladda fikradda ah in si fiican loo tababbaray, iyo sidoo kale in lagu barto faa'iidada iyo khasaarinta taranta taranka.
Waxaan sidoo kale go'aansanay in aan u hayno maqaal ah arrintan si aan kuugu ogaano asaaska aasaasiga ah ee doorashada nooca, diyaarinta xaaladaha lagama maarmaanka ah ee xabsiyada iyo kuwo kale oo badan, taas oo hubaal ah inay faa'iido u yeelan doonto wax kasta oo doofaarka doofaarka ah.
Noocyada doofaarka: midkee ayaa ka wanaagsan inuu doorto wax soo saarka ugu badan?
Waa wax aad u adag in la yiraahdo mid ka mid ah ama mid kale oo ku habboon ayaa ku haboon in lagu tarmo guriga marka ay adag tahay. Ka dib, intooda ugu badan ee hadda jira ee hadda jira waxay si buuxda ula qabsan karaan labadaba shakhsi ahaaneed iyo beerista miisaaniyad warshadeed.
Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha guriga ku jiraa waxay ahaan doonaan kuwo wax ku ool ah si loo helo miisaanka jirka.
Marka aad dooranaysid doofaarro doofaar, waxaad u badan tahay inaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid nooca waxqabadka uu yahay, iyo nooca aad u baahan tahay.
Doofaarka doofaarka, kuwan soo socda ayaa kala duwan. noocyada xayawaankani:
Nooca doofaarka Greasy
Laga soo bilaabo magac si cad ujeedada ugu weyn ee xayawaanka noocan ahi waa in la helo qadar badan oo ah unug ama dufan. Dabcan, hilibka ku jira baqtiga sidoo kale waa tiro aad u tiro badan, laakiin da'da 0.5 sano ee doofaarrada noocan oo kale ah, koritaanka muruqyada muruqyada ayaa xoogaa hoos u dhacaya.
Sababtaas awgeed, waa mid si gaar ah loo ururiyey unugyada adipose. Mid ka mid ah hilibka doofaarka ee noocaan ah waxaa ku jiri kara 40-45% dufanka.
Qadarka hilibka ee ku saabsan boogaha doofaarka dufan ayaa gaari kara sida ugu sareysa 53%. Dibedda, doofaarkan waxaa lagu kala saaraa jirkooda iyo jirkooda ballaaran.
Jidhka hore ee jidhka ayaa badanaa ka culus yahay dhabarka, halka xaamku sidoo kale uu gaaro qiyaas aad u ballaadhan.
Noocyada ugu caansan ee doofaarrada digaaga ah ayaa ah baska Ukraine, Mirgorodskaya, madow waaweyn, Hungarian Mangalitsa, Berkshire.
Hilibka doofaarka ama hilibka doofaarka
Noocaan waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in unugyada xayawaanka ee xayawaanku ay si aad u xoogan u kobcaan, halka horumarinta unugyada dufanka ay aad u yaryihiin.
Inta badan noocyada noocan ah waxay ku faani karaan kobaca si aad u degdeg ah oo carruurtooda ah: iyadoo la siinayo quudin haboon oo quudineysa, da'doodu tahay 7-8 bilood ee nolosha waxay awoodaan inay gaaraan tiro ballaaran oo ah 100 kiilo.
Badanaa, xaddiga hilibka laga soo saaray mid ka mid ah doofaarradan oo kale ah waxay noqon kartaa 58 ilaa 68%, inkastoo mararka qaarkood sawirkani gaari karo ilaa 80%.
Qaddarka nudaha adipose wuxuu ku kala duwanaan karaa 21 ilaa 32%. Marka la eego jirka, doofaarka hilibka lo'da badanaa waa mid aad u dheer, oo leh laab laaban.
Nooca qaybta danbe ee korontada ayaa si gaar ah u kobcaya, taas oo ka dhalatay, taasina waxay ka muhiimsan tahay xajmiga hore.
Ka mid ah wakiilada doofaarro lo'da ah waa in loogu yeeraa doofaarka caanka ah ee ingiriiska, Duroc, Landrace, vislobryukhuyu, faaruqin Estonian, Pietrain, Tamvors.
Nooca Universal ee taranka doofaarrada
Noocaan wuxuu leeyahay magac kale - hilib. Xitaa ka hor inta aanay gaarin qaan-gaarnimada, wakiillada noocaan ah waxay awoodaan in ay soo saaraan tiro badan oo ah hilibka jilicsan.
Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale awood u leeyihiin in ay si xoog leh u yeeshaan baruurta. Guud ahaan, miisaanka ayaa si dhakhso ah uga yimaada, xitaa iyadoo la siinayo quudinta caadiga ah ee qashinka cuntada.
Guud ahaan, calaamadda qadarka hilibka ee laga heli karo hal qudha ayaa ku kala duwanaan karta 53 ilaa 65%, iyo unugyada dufanka leh - laga bilaabo 29 ilaa 37%.
Waa maxay shuruudaha lagu ilaaliyo xayawaanka sida doofaarrada?
Inkasta oo doofaarka guud ahaan looma magacaabi karo xayawaan aad u culus, waxaa haboon in la tixgeliyo qaar ka mid ah xaaladaha lagama maarmaanka ah. Ka dib oo dhan, ma aha oo kaliya wax soo saarka xayawaanka, laakiin sidoo kale suurtagalnimada ee doofaarrada taranka waxay ku xirnaan doontaa on.
Sida ugu fiican oo dhan waa in la siiyo xoolaha leh daadad ballaaran. Markaa, diyaarintiisa waa in lagu xalliyaa ka hor intaan la iibsan xayawaanka yaryar. Sidaa daraadeed, daadku waa inuu ka kooban yahay qaybaha khasabka ah ee soo socda:
Qalabka (qalabka mashiinka) ee dayactirka joogtada ah ee xayawaanka. Waa in sidoo kale loo qeybiyaa laba qaybood oo shuruudo ah - meel loogu talagalay quudinta, halkaas oo ay ku dhejin doonaan, iyo diin, halkaas oo xayawaanka ay wakhti intiisa badan ku qaadanayaan.
Mashiinka yar yar wuxuu noqon doonaa qiyaasta miisaanka 3m2, ee loogu talagalay inuu uuraysto uurka wuxuu u baahan yahay in la kordhiyo 1 m2, iyo nuujinta - ilaa 6 m2.
Meelaha u adeegi doona meel loogu talagalay xayawaanka socodka xilliga diiran.
Maaddaama qaar ka mid ah jixda doofaarka lagu hayn karo qiyaastii ku dhowaadba saacad kasta, waa inay jirtaa meel ka sarreysa meel (ama ugu yaraan qayb ka mid ah).
Ceel gaar ah oo god qoday biyo kuwaas oo xayawaanku ku dabaasho.
Waa in sidoo kale la iloobo in doofaarku waa xayawaan weyn oo ballaadhan. Gaar ahaan, labada caws iyo kalluunba, waxay inta badan u nugul yihiin jebinta qaybaha, oo wax u dhimaya dabaqa.
Dabcan, xagaaga, waxay awoodi doonaan inay ku qancaan baahida kaneecada, laakiin in lagu hayo xiliga qaboobaha waa in uu ahaado mid aad u xoogan.
Ha iloobin in saqafka qolofta doofaarku ay tahay mid xoog leh, diirran oo aan biyuhu lahayn. Tilmaamaha noocan oo kale ah waa in lagu xisaabtamaa iyo derbiyada, kuwaas oo ka ilaaliya xayawaanka inay ka dhigaan mid barafoobaya.
Dhulka waa inuusan aheyn mid xoog badan, laakiin sidoo kale waa diiran yahay. Waa in la keenaa majarafad, taas oo ay suurtogal tahay in laga saaro saxarada xayawaanka.
Sidoo kale, pigsty waa muhiim in la haysto iyo iftiinka korontadataas oo ay ku jiraan xilliga xoqan iyo toddobaadyada ugu horreeya ee quudinta dhalidda yar yar by abuur ah. Dareemayaasha da'yarta waxay sidoo kale u baahan doonaan kuleyliyaha.
Dhisida maaddooyinka awood u leh in ay kuleylka kuleylka, sty waa in laga dhejiyaa gudaha. Tani waxay u baahan tahay tixgelinta nadaafadda iyo nadaafadda, taas oo ah fursad ay kaga hortagto faafidda cudurada kala duwan.
Dabaqa ugu fiican ee doofaarka waa alwaax, laga bilaabo guddiyada caadiga ah. Sidoo kale, dabaqa waa in lagu sameeyaa meel yar oo jilicsan, si biyaha iyo kaadida xayawaanku u socdaan. Laakiin dayrarka qalabka mashiinka ayaa xitaa laga sameyn karaa biraha, sababtoo ah alwaax kama faani karo xoog iyo cimri.
Goobta socodka waa inay noqotaa mid ballaaran, gaar ahaan haddii la qorsheynayo in la soo saaro tiro badan oo shakhsiyaad ah ama beere ah oo leh dhalinyaro yar.
Dhiig ka yar 10 m2 ma aha mid ku haboon. In qalinka sidoo kale waa in lagu rakibo baaquli cabitaanka for doofaarrada, laakiin waa in lagu dhejiyaa buur yar. Haddii kale, xayawaanku waxay nadiifinayaan biyaha ay ku jiraan.
Ka doodista sifooyinka cuntooyinka lagama maarmaanka ah ee xayawaanka
Cunto for doofaarrada waa inuu ku jiraa sida fiyuus yar intii suurtagal ah, sababtoo ah calooshoodu ma awoodaan inay si buuxda u cunaan cuntadaas. Sidaa darteed, waxaa fiican in la siiyo xayawaanka quudinta xoogga, iyo casiir iyo qalafsan si ay u isticmaalaan sidii wax lagu daro.
Isla mar ahaantaana, waxaa jira laba nooc oo quudinta: qoyan iyo qallalan.
Xaaladda kowaad, xayawaanka waxaa la siiyaa mastarro biyo ah. Tani waa, dhab ahaantii, habka dhaqanka ee quudinta, marka xayawaanka la siiyo qashinka cuntada iyo khudaarta cagaaran ee la kariyey.
Dhinaca kale, qaabkani waa mid aad u fudud, maadaama uusan u baahnayn in la iibsado wax quudin dheeraad ah, iyo dhinaca kale, ma awoodo inay soo saaraan koror gaar ah oo culus ee miisaanka.
Sidaa darteed, haddii aad weli rabto inaad ku tiirsato soosaarka degdegga ah ee badan ee hilibka, weli wali waa mid caqli-gal ah in la isticmaalo cuntada qalalan. Iyaga oo leh, iyo dhib yar, iyo natiijada quudinta oo kale waxay noqon doontaa mid la ogaan karo.
Waxa kaliya - oo ay weheliso quudin qalalan doofaarka ayaa u baahan doona in la siiyo biyo badan oo cabitaan ah.
Laakiin marka laga reebo tan, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo waxyaabaha gaarka ah ee quudinta, iyo gobolka taas oo ay ka fiican tahay in la siiyo xoolaha:
Waxa muhiim u ah doofaarka si ay u soo saaraan wax badan oo hadhuudh ah, laakiin ma aha mid guud ahaan. Xayawaanku dabcan wuu cuni doonaa, laakiin doofaarku si buuxda uma cuni karo hadhuudhka, badankuna waxay soo baxayaan saxarada.
Baradhada waxaa loo isticmaali karaa saldhigga xayawaanka xoolaha, gaar ahaan haddii aad dalbato nooc qoyan oo quudinta ah. Si kastaba ha ahaatee, digriiga waxaa la siiyaa doofaarka marka la kariyo. Ka hor inta aan la karin, waa in la maydho, laakiin biyaha laga bilaabo baradho waa in aan la siin xayawaanka.
Rootiyadaha cagaarka waxaa la siiyaa oo kaliya tiro yar, iyo kaliya sida fitamiinada dheeraadka ah.
Waa in aanad ku siinin qadar badan oo quudin ah hal mar, sababtoo ah waxay weli ku jiri doonaan berkadaha, taas oo si joogto ah loo nadiifin doono.
Iyada oo ah ili ah borotiinka doofaarka, waxaa muhiim ah in lagu daro kalluunka ama hilibka iyo cuntada lafaha, saliidda iyo khudradda cawska, dalagyada miraha, iyo caanaha dufanka leh. Protein si gaar ah ayey muhiim u tahay caleenta lo'da ee doofaarka.
Noocyada iyo xeerarka quudinta doofaarrada
Iyadoo ku xiran haddii aad rabto inaad hesho dufan ama hilib badan oo ka dhalatay quudinta xayawaankaaga, habka quudinta ayaa ku xirnaan doonta.
Haddii caanaha hilibka doofaarka, oo aad rabto in aad hilib caato ah ku leedahay lakabka 3-inji ee unugyada adipose, ka dibna naaxinta doofaarka yar yar ayaa laga bilaabi karaa horaantii 2.5 bilood oo sii wad ilaa ay gaaraan da'da 6 bilood.
Haddii dhammaan talooyinka lagama maarmaanka ah la raaco, sida waqti gaaban doofaarku wuxuu gaari doonaa tiro dhan 90-100 kiilo garaam. Marka, halka doofaarku aanu gaarin 70 kiiloogaraam oo miisaankeedu yahay, oo sii:
Qiyaastii 5 kiiloogaraam maalintii cagaarka la jarjaray (digir, digir, dhir, alfalfa).
Lama oggola in ka badan 1.1 kiilo oo quudin ah, taas oo si buuxda loogu beddeli karo isla qashinka cuntada ee jikadaada.
Laga soo bilaabo 70 kiiloogaraam doofaar, waxay bilaabaan inay udheeraadaan xitaa si xoog leh: cagaarka ayaa mar hore la siiyaa 6 kiilo garaam, sidoo kale waxay ku daraan ilaa 5 kiilo oo baali ah oo baalal ah iyo xididdo, qiyaastii 2 kiilo oo baradho ah, xaddiga dufanka waa in la kordhiyaa 1.5 kiiloogaraam.
Si loo ilaaliyo dheef-shiid kiimikaad caafimaad leh iyo xaalad wanaagsan oo jidhka xayawaanka ah, waxaa sidoo kale la siiyaa 5-25 garaam oo jeeso iyo 10-35 garaam oo cusbo ah.
Cuntada hilibka doofaarka ee dhabta ah, naaxinta waxay bilaabmaysaa 2.5 bilood, marka doofaarku hore u culus 25 kiilogaraam, iyo boorashadu waxay nuugeen 2 bilood jir. Cuntada waxaa ka mid ah:
3 kiilo oo cagaaran oo la jarjaray.
1.5 kiiloogar oo caano ah
1.5 waxay diirada saartaa.
2 kiilo oo bocor ah iyo dabocase.
Ilaa 20 garaam oo cusbo ah.
Cabbiraadaha xayawaanku ku yar yahay.
Bilowga naas nuujinta, miisaanka maalinlaha ah ee 450 garaam ayaa ah caadada, laakiin laga bilaabo da'da 5.5 bilood iyo wakhtiga ku xigta miisaankiisu waa inuu noqdaa ugu yaraan 500-600 garaam.
Waa mid aad u muhiim ah in laga saaro raashinka doofaarka oo idil kuwaas oo yareeya tayada hilibka - soy, qashinka kalluunka (doofaarku wuxuu bilaabi karaa in uu uriyo sida kalluunka), bran (si xun loo dheefshiido).
Iyada oo quudinta noocaas ah 7 bilood, xayawaanku waa inuu miisaamaa 90 ilaa 95 kg. Sidoo kale, si aad u hesho hilib doofaar wanaagsan, doofaarku waa inay heystaan ​​meelo badan oo socod ah, waxay la cunayaan wax ka badan laba jeer maalintii.
Waxtarka ugu fiican waa naaxinta, oo loogu talagalay helitaanka qadar badan oo baruur. Si arrintan loo sameeyo, waxaa wanaagsan in dufan laga dhigo midho ama dhalinyaro hore u qaateen 100 kiilo garaam.
Waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo tan hodan ah quudinta ee carbon, taas oo ah, galley, baradhada iyo xididdo. Si loo gaaro miisaanka maalinlaha ah ee 1 kiiloogaraam xagaaga, raashinka xayawaanku wuxuu ka kooban yahay alaabooyinka sida:
4 kiilo oo caws ah.
3.5 kiiloogaraam of bocorka.
3.3 kiilogaraam oo ah qashinka ama qashinka cuntada.
Maaha in ka badan 55 garaam oo cusbo ah.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan beeraha dhirta: waxaanu helnaa farcankiisa
Badanaa doofaarka taranka waxay ka iibsadaan suuq yar oo suuqa ah, laakiin waad iska ilaalin kartaa beertaada.
Si kastaba ha noqotee, waa in maskaxda lagu hayaa in qaangaadhkeeduna uusan dhicin ka hor 8 bilood, faro-barkeeduna wuxuu dhacaa 115 maalmood ka dib marinnada.
Wixii la marsiiyo, waa inaad isticmaashaa doofaar oo gaartay 100 kiilo garaam, adigoon cillad lahayn. Taas ka hor, waxaa muhiim ah in si fiican loo quudiyo, oo uur qaadashada cuntada leh faytamiin badan.
Si loola tacaalo mishiinka, waa in beertu ay udeedsataa ugaadhsi - waxay bilaabi doontaa inay si dhaqso ah u dhaqmaan, casaanka ayaa soo baxaya. Waa in lagu dhajiyo boor ka dib 12 saacadood, ama waxaa si madax bannaan loo karin karaa. Ka dib marka la isku miiro, 3da bilood ee ugu horreeya ee doofaarku waa inay helaan cunto joogto ah, ka dibna waxaa la sameeyaa wax badan oo xooggan.
Sida loo koro dhalinyaro wanaagsan: xeerarka daryeelka ee doofaarrada dhalashada
Beertu waxay ku dhalan tahay mid aad u daciif ah, xittaa kormeer fiican oo labadaba ah iyo bini-aadanba waxaa jira halis weyn oo ah dhimashadooda. Sidaa daraadeed, xitaa ka hor intaan faro joogin waa in ay ka taxadaraan xaaladaha lagama maarmaanka u ah dayactirka ilmaha dhashay iyo diyaarinta quudinta loo baahan yahay.
Sidaa darteed, heerkulka pigsty waa in uusan hoos u dhicin + 18ºS. Qolku waa inuu ahaadaa mid si fiican u qalajisa oo la qalajiyo.sidaas darteed ma jiraan wax qoyan meel kasta, ka taxadar nalalka dabiiciga ah.
Marka la eego quudinta doofaarka yaryar, waxa ugu wanaagsan in la quudiyo caanaha beeraha, taas oo kordhin doonta difaacooda oo u oggolaaneysa inay miisaan culus oo degdeg ah u helaan.
Laga soo bilaabo toddobaadka saddexaad ee soo socda waxaa muhiim u ah xayawaanka yaryar si ay u bilaabaan bixinta raashin kale oo kiciya kobaca sii kordhaya. Si kastaba ha ahaatee, caanaha waxaa la siin karaa laga bilaabo maalinta shanaad ee nolosha xoolaha.
Sidoo kale, waxaad ku dari kartaa dufaac kala duwan, laga bilaabo maalinta 20-aad ee nolosha - khudradda la kariyey iyo la shiiday. Qaadashada doofaarrada doofaarka ayaan lagula talin mudo ka badan 4 todobaad ka dib markaad xoqdo.
Haddii aysan jirin wax doog ah, digaagdarrada waxaa ku jira dufan leh caanaha lo'da ama caanaha naaska. Laga bilaabo toddobaadkii labaad waxay bilaabaan inay si buuxda u quudiyaan. Sidoo kale, da'da caanaha oo kale, waxay muhiim u tahay iyaga inay isku duraan fitamiino gaar ah oo leh birta.
Qodobada lagama maarmaanka u ah daryeelka caafimaadka doofaarka
Ma ahan mid adag in la daryeelo doofaarka, maaddaama dhinacyada muhiimka ah ee loo baahan yahay in la sameeyo waa quudinta, ilaalinta dhallinta iyo hubinta xaaladaha ugu habboon guryaha. Gaar ahaan, kuwa ugu dambeeya waa in la xuso:
Noocyada qaarkood ee doofaarrada ma u dulqaadanayaan isbedbeddelka heerkulka, sidaas darteed barnadu waa inay mar walba u dhexeysaa 12 iyo 16ºS. Wixii da 'yar yar - laga bilaabo 18 ilaa 20 º.
Ma oggolaan karno qoyaanka qolka in uu kordho 85%, doorashada ugu fiican - 70%.
Ma oggolaan karno qabow iyo qaboojiye in doofaarka.
Waa muhiim inaad u hoggaansanto heerarka nadaafadda iyo nadaafadda ee ilaalinta doofaarka, si joogto ah u nadiifiso dabaqa koollada.
Dhallinyaradu waxay xaqiiqdii u baahan yihiin socod.
Ha u ogolaanin faddarada biyaha ee foornada cabitaanka.
Jajabiyaha waa in laga nadiifiyaa cuntada ka hadhay oo marmarna biyo raaci.